Atụmatụ 10 dị mkpa maka ndị na-ere Novice | Martech Zone
Tuesday, January 17, 2017 Fraịde, Ọktọba 2, 2020 Lexie Lu
Yabụ na ị dịla njikere igbutu ezé gị na ụwa ọsọ ọsọ, na-atọ ụtọ nke ahịa. O doro anya na mkpali onwe gị dị mkpa, mana ịkwesịrị ịnabata ndụmọdụ a nwalere oge ma ghọta otu esi etinye ya n'ọrụ gị na ebe ọrụ gị. Nọgide na-agụ maka itoolu dị mkpa ga-enyere gị aka ịchọpụta, itolite ma nwee ọganiihu na ụlọ ọrụ azụmaahịa.
Nwee Nnyocha - Gbalịa lelee ọnọdụ, teknụzụ, na omume anya oge niile na ebumnuche ịmeghe ihe ị nwere ike ịchịkọta site na ha iji rụọ ọrụ ahịa gị. Ọ bụrụ n’inwere echiche ziri ezi, mkparịta ụka nkịtị gị na ezigbo enyi gị nwere ike ịkpalite echiche ọhụrụ gbasara otu esi akwalite njem akwụkwọ akwụkwọ nke onye ahịa gị kachasị ọhụrụ.
Chee echiche n'èzí igbe ahụ - Dịka onye na-ere ahịa novice, ị nweghị oke okenye n'etiti ndị ọgbọ gị. N'ihi eziokwu ahụ, ụfọdụ kọntaktị na akụrụngwa nwere ike ịdị maka ndị nwere ahụmịhe karịa ga-abụ ndị a machibidoro gị n'oge a na ọrụ gị. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji daa mbà. Gbaa onwe gị ume ka ị chee echiche n’èzí igbe ahụ, karịa usoro aghụghọ na usoro. Resourceghọta ihe ga-abara ndị ahịa uru ma nwee mmasị n'ebe ndị ọgbọ gị nọ. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche n'ụzọ ndị na-agaghị ekwe omume, na-ajụ onwe gị mgbe niile, sị, “Onwere ihe na-efu m?"Ma ọ bụ"Enwere m ike ịme nke a n'ụzọ dị iche?
Network Dị ka Pro - Ebe ọ bụ na ị bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ọhụụ, ọ ga-abụ na ọ ga-adị gị ka ọ ga-adịtụ ntakịrị site na ahụmịhe enweghị ahụmịhe, yana ihe ọmụma ndị mmadụ amabeghị gị Agbanyeghị, ị ka nwere ike igosi ndị ọzọ na ị dịla njikere ime nke ọma na-amụta otú e si abụ ezigbo onye ọrụ ntanetị.
Mgbe ọ bụla ị na-na a ogbako, akparị ụka na ndị ọrụ ibe n'elu nri ehihie ma ọ bụ ọdụ na ụgbọ okporo ígwè n'oge gị na-aga aga, mgbe niile-adị njikere ikwu banyere ọrụ gị. Tụlee onye ọ bụla ị hụrụ onye nwere ike inyere gị aka nke nwere ike ibuli ọrụ gị n'ọkwa ọzọ. Debe kaadị azụmahịa na aka ma depụta ma ọ dịkarịa ala otu “okwu mbuli elu” ị nwere ike iji mgbe mmadụ jụrụ gị, “Ya mere, gịnị ka ị na-eme?” Gbalịsie ike ịdị na omume gị kachasị mma n'oge niile, kwa.
Mmetụta ị nwere ike ime ka ndị mmadụ nọ na gburugburu gị nwee mmasị ịmatakwu gị nke ọma ma mee ihe ha nwere ike ime iji kwalite ọrụ gị, mana nwekwara ike inwe mmetụta ọzọ.
Jide Ozi Gị - persubụ onye na-eme ka mmadụ kwenye adịghị mfe dịka o nwere ike iyi, n'ihi na enwere ihe ndị ị na - enweghị ike ịchịkwa. Nwere ike ijikwa akụkụ ụfọdụ nke ozi ị nyefere site na iji okwu na-atọ ụtọ, akụkọ ndị nwere ike ịkọwa okwu, na ihe atụ na-atọ ọchị, mana ụbụrụ ndị mmadụ na-ewerekwa ozi ha nụrụ ma jikọta ya na ahụmịhe gara aga ha gafere. Nweghị ike ịchịkwa akụkụ ahụ, mana ị nwere ike itinye aka na otu esi ahụta ozi ahụ.
Otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ site n'itinye mirro, usoro ebe onye na-ekwu okwu na-eicsomi asụsụ ahụ amaara na onye na-ege ntị. Nmegharị anya na-enyere aka iwulite mmekọrịta ma mee ka ndị mmadụ nwee ahụ iru ala na ọnụnọ gị, na-eduga ha na-emeghe uche banyere ihe ị na-ekwu. Dị ka ụfọdụ ọmụmụ si kwuo, ahịa si na 12.5 ruo 66 percent mgbe a na-etinye usoro mirro.
Mara Onwe Gị Na Metrics Ahịa - E nwere ụfọdụ ụzọ dị mfe ị ga - esi kọọ ma ụzọ azụmaahịa gị ọ na - arụ ọrụ etu esi ezube. Eleghi anya otu n'ime ndị ahịa gị bụ nnukwu ọmarịcha egwu na-agbaghaghachi na ụlọ ọrụ ntụrụndụ mgbe afọ 10 gachara. Kwuo na ị chọpụtala ọkwa ọkwa ya na ngwa ngwa izu mgbe ị na-agba ọsọ mgbasa ozi zuru oke na akwụkwọ akụkọ kachasị wee wepụ mgbasa ozi Youtube raara onwe ya nye. O doro anya na enwere ezigbo ohere ihe ndị ị mere iji kpọsaa ntọhapụ ahụ mere ka arụmọrụ dị mma.
Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ, ịkwesịrị dabere na metrik na-apụtachaghị ìhè iji chọpụta ma ihe ị na-eme ọ bara uru, ma ọ bụ ọ bụrụ na mgbanwe dị mkpa. Ihe omuma banyere nleta webụsaịtị, ịga egwu egwu, mmasị onye na-ese ihe gafee ọwa mgbasa ozi mmekọrịta yana ọbụlagodi nbudata ụdaolu nwere ike ịkọ akụkọ niile banyere usoro azụmaahịa.
Lelee Ọganihu nke Industrylọ Ọrụ anya -'ve mutaworị otu o si dị mkpa ka inwe echiche ịchọ ịmata ihe ma ghọta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmekọrịta ọ bụla nwere ike ịkpalite ezigbo echiche maka ọrụ ahịa gị. N'otu aka ahụ, gbalịsie ike ịnọ na mmepe nke ụlọ ọrụ. Ahịa ahia, weebụsaịtị, na blọọgụ na-enye nghọta dị oke mma nke nwere ike inyere gị aka ịmụ banyere ụzọ ọhụụ dị irè tupu ha abụrụ isi. Denye aha na akwụkwọ a Martech ma gee ntị Douglas Karr's Martech Zone Ajụjụ ọnụ Podcast! Gaghị enwe ike ịghọta edemede ọ bụla, mana oge na-aga, ị ga-abawanye ihe ọmụma gị oke.
Nweta mmụọ sitere n'aka ndị dị mma - Ka ị na-arụ ọrụ site na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa, dịrị umeala n’obi ma na-ekpughere onwe gị mgbe niile n ’ndabere ndị mmadụ nwere mmasị na ya. Ndị ahụ agaghị anọ n'ụlọ ọrụ azụmaahịa, mana ha ka nwere ike ịkụziri gị ụkpụrụ ndị ga-aba uru iji mezuo ebumnuche gị. Ọ bụrụ na ndị na - akpali gị bụ ndị ama ama, tụlee ibudata pọdkastị, ịgụ akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ lelee ajụjụ ọnụ Youtube iji nwetakwuo nkọwa banyere otu uche ha si arụ ọrụ.
Choputa Teknụzụ akpaaka Teknụzụ - Dị ka ụfọdụ ndị nyocha ụlọ ọrụ si kwuo, ihe ọmụma banyere akpaaka ahịa bụ ihe nkà na-achọ nke nwere ike inyere gị aka inwe ọganihu mgbe ị na-agagharị na-agbanwe ala na-agbanwe agbanwe. E wezụga inweta ihe ọmụma banyere isiokwu na-arịwanye elu, ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ọrụ kwa ụbọchị. Ahịa akpaaka na-eme ka ọ dị mfe ịgbasa okwu ahụ, na-ebute ụzọ, ma na-ekwurịta okwu na ndị ahịa, na-egbughị oge site na ngbanwe.
Na-egosipụta Ndidi - N'ime ọsọ ọsọ gị iji nwee ọganiihu ma nweta nsonaazụ maka aha onye ahịa gị, ịnwere ike ịnwe ndidi, karịchaa ma ọ bụrụ na ọ dị ka usoro emere ọhụụ anaghị arụ ọrụ. Dị ka o siri sie ike mgbe ụfọdụ, nwee àgwà na-adịgide adịgide. O yikarịrị ka ị gaghị ahụ nnukwu uru n'abalị. Ndidi dị mkpa, ọkachasị tupu ị na-enyocha data iji hụ ma enyo gị ọ bụ eziokwu.
Soro Obodo Ndi ahia - Ahịa nke oge a dabere na teknụzụ iji kesaa ma tụọ atụmatụ dị oke oke. Ngwaọrụ dị ebe a iji nyere aka ma ị nwere ike ịmụ ụda naanị ịjụ ajụjụ ndị ọkachamara na obodo anyị. Jide n'aka isonyere obodo ndị na-ere ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta - ọkachasị ndị na-ekwu maka ịre ahịa n'ime ụlọ ọrụ gị. Gaghị aghọta mkparịta ụka ọ bụla - mana ị ga - enweta ezigbo ndụmọdụ ga - enyere gị aka ịgbasawanye ihe ọmụma gị na oge.
Nnọọ, Onye ahịa Ọhụrụ!
Olileanya, ndụmọdụ iri a na-enyere gị aka inwekwu obi ike dị ka onye na-azụ ahịa ọhụrụ. Cheta, ọbụlagodi mgbe ị gbanwere site na ọkachamara na-azụ ahịa novice gaa ọkachamara nwere ike ịkọwapụta, enwere ihe ịmụtakwu oge.
Tags: esi abụ onye ahiaụlọ ọrụịmụta ahịamarketingụlọ ọrụ ịzụ ahịankatanetworknetwọkndị ahịa ọhụrụndị ahịa novicenovice ahịa
Lexie Lu bụ onye nrụpụta UX na-enweghị akwụkwọ na blogger. Ọ na-agbaso usoro ntanetị kachasị ọhụrụ na UX yana na-enwe iko mgbe ọ dị nso. Ọ na-ede ihe Imewe anụ ma nwee ike soro na Twitter @IGIHE.